Olan’ny Rugby: tsy nitranga ny orinasa sy ny minisitera
Par Taratra sur 02/07/2020 NS Malagasy, NS-Sports
Tsy tanteraka, omaly alarobia 1 jolay, ny fihaonan’ny telo tonta, ahitana ny Malagasy rugby sy ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany ary ny orinasa, teo amin’ny fijerena ifotony ilay ivontoeram-piofanana rugby, etsy amin’ny kianja Makis Andohatapenaka. Tsy tonga teny an-toerana, araka ny fotoana efa nifanarahana mantsy ny solontenan’ny minisitera sy ny mpitantana ilay orinasa tomponantoka […]
Basikety-“Youth Leader”: samy milaza ny hampandroso ny basikety 3×3 ireo mpandray anjara
Samy nilaza hampandroso ny tsirairay avy, ho an’ny taranja basikety lalaovin’olona telo, ao amin’ny faritra misy azy ireo mpandray anjara amin’ny fifaninanana “Youth Leader”, karakarain’ny Federasiona malagasy ny basikety. Iombonana ny tanjona ho azy ireo, dia ny hampandroso ny basikety 3×3 ao amin’ny faritra misy azy. Raha ny hita amin’ireo tanora mifaninana, samy nahazo vokatsoa […]
Kitra afrikanina: amin’ny 2021 ny fifidianana izay ho filohan’ny Caf
Fantatra fa hotanterahina amin’ny taona 2021 ny fifidianana izay ho filoha hitantana indray ny kaonfederasiona afrikanina ny baolina kitra (Caf). Tsy mbola misy mitonona ho kandidà hifaninana amin’izany. Fanapahan-kevitra noraisin’ny komity mpitantana eo anivon’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf), nivory ny talata 30 jona lasa teo, ny daty hanatontosana ny fifidianana izay ho filoha hitantana […]
Mpanamboatra zavamaneno: « Izay mahay, mamihina », hoy Ralanto
Par Taratra sur 02/07/2020 NS Malagasy, NS-Culture
Ralantoniaina Henintsoa, folo taona mahery no nanamboarany zavamaneno, toy ny lokanga, gitara, sns. Nianatra, nikaroka, nandalina ary nampihatra izany amin’ny asa tanana ataony izy. Anisan’ny nahitany lalan-tsarotra anefa ny nitady izay hanatsarana hatrany ireo zava-bitany. « Ny antsika, izay mahay manamboatra, mamihina izany », hoy izy. Tsy manoro na mampianatra izy ireny, raha ny fanazavany hatrany. « Amin’ny […]
Inscae – tarika Miadan-tseheno: “Tokony hifampitsimbina ny mpitarika”
Nanatanteraka fanampiana ho an’ny akanin-jaza Lovasoa etsy 67ha, afakomaly ny tarika “Miadan-tseheno” ahitana an-dry Mialy, Denis, Tsiory, Heninkaja ary Nomentsoa. Mpianatra taona faharoa amin’ny sampana iraisana momba fitantanana orinasa sy fitantanam-bola ao amin’ny Inscae izy dimy mianadahy ireo. Nanolotra “bidon” fanasana tànana miaraka amin’ny savony, ronono mandry ary macaronis izy ireo. Tamin’izany koa no nanomezany […]
Dinika amorom-patana: hovaliana ny fanontaniana momba ny teny malagasy
Nivalona andro vitsy ny « Volan’ny teny malagasy ». Tsy nanakana ny Fikambanan’ny mpikabary malagasy maneran-tany hanohy ny hetsika efa natombony izany. Ny asabotsy 4 jolay izao, manomboka amin’ny 4 ora tolakandro ka hatramin’ny 6 ora hariva (oran’i Madagasikara), hanatanteraka hetsika iraisam-pirenena « Dinika amorom-patana » ry zareo. Fotoana hamaliana ireo fanontaniana manitikitika ny rehetra momba ny teny malagasy. […]
Tantara fihaino: nandray mpikambana sy hankalaza ny faha-10 taona V.M.T
Tontosa ny asabotsy 27 jona 2020 teo ny fivoriamben’ny Vondron’ny mpiangaly tantara fihaino, notarihin’ny filoha am-perinasa, i Mbolaranto Ramanantsoa. Nisy ny hevitra tinapaka… … Nisongadina tamin’izany ny fandraisana ireo mpikambana vaovao mahatratra 18 mianadahy. Mpanoratra tantara fihaino avokoa izy ireo. Marihina fa ivondronan’ireo mpanoratra sy mpilalao ary mpanatontosa tantara fihaino ary ny angano ity fikambanana […]
Happy Women – Andraharo: miaro ny zon’ny ankizy
Par Taratra sur 02/07/2020 Faits Divers, NS Malagasy
Ny 30 jona, famaranana ny volana natokana ho an’ny ankizy, nijery ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana eny Andraharo ny Happy Women, fikambanam-behivavy miasa ao amin’ny Novo-Comm Ogilvy. Ny fitandroana ny hasina sy ny zo maha olona nifantohan’ny fikambanana, nizara fanomezana ho an’ny ankizy 100 natao tao amin’ny biraom-pokontany Andraharo. Hiatrehana ny krizy ara-pahasalamana, ankehitriny, […]
HJRA: tratran’ny covid-19 ny sampana fameloman’aina
Par Taratra sur 02/07/2020 Divers, NS Malagasy
Niteraka resabe, omaly ny fahafantarana fa nahitana tranga covid-19 ao amin’ny sampan-draharaha misahana ny fameloman’aina ao amin’ny HJRA. Fantatra àry fa misy mpiasa mitondra ny tsimokaretina coronavirus ao. Anisan’ny mandray marary betsaka ity sampan-draharaha ity ary izao tsy afa-bela fa efa nidiran’ny valanaretina covid-19 izao hany koa. Tsiahivina fa andro vitsivitsy lasa izay, efa nisy […]
Tetiandrom-panadinana: hatao ny 14-15 jolay ny CEPE katolika
Namoaka fanambarana ny tompon’andraikitra misahana ny fampianarana amin’ny sekoly katolika eto Antananarivo (DIDEC) fa hisy ny fanadinana CEPE-BEPC ary bakalorea ho azy ireo manokana toy ny efa natao tamin’ny taon-dasa. Ho an’ny fanadinana CEPE katolika, ny talata 14 sy alarobia 15 jolay ho avy izao no hanatanterahana izany. Hanomboka ny alatsinainy 20 ka hatramin’ny talata […]
Fihanaky ny valanaretina: olona 13 matin’ny tazo, ny fanafody anefa tsy ampy
Olona 13 amin’ny 32 maty tany amin’ny distrikan’i Befotaka no fantatra fa voan’ny aretina tazo ka nitarika ny fahafatesany, nanomboka ny 14 mey ka hatramin’ny 13 jona lasa teo, araka ny fanazavan’ny mpikambana ao amin’ny kabinetran’ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. Voalaza fa tsy ampy ny fanafody ka nandefa tahirim-panafody sy fitaovana fanaovana TDR hijerena ny aretina […]
Fisavana arovava: mitaraina noho ny antsojay ireo mpamily taxi-be
Mitaraina amin’ny filohan’ny kaoperativa 126 sy 157 ireo mpamily taxi-be sy ny mpanampy azy amin’ireo zotra ireo fa iharan’ny antsojay ataon’ny mpitandro filaminana manara-maso ny fitondrana arovava. Manao izany ny mpandeha rehetra rehefa hiakatra ao anaty taxi-be, ampidinina nefa izany raha vao mahazo toerana izy ka tsy tsikaritry ny mpanampy. Ny polisy no nahita fa […]
Nijoro vavolombelona sy nanao fanentanana: tratran’ny covid-19 koa ny Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana
“Mety hahavoa sy hifindra amin’ny olona rehetra ny valanaretina covid-19”, hoy ny minisitry ny Fahasalamana teo aloha, ny Pr Andriamanarivo Mamy Lalatiana. Nijoro vavolombelona sady nanao fanambarana ity mpitsabo ity, omaly fa anisan’ireo mitondra ny tsimokaretina coronavirus ny tenany, taorian’ny fitiliana natao azy. “Ny fomba fijery miabo (positif) ny olana no hahafahana mifehy ny tranga […]
Misaona ny antoko Tim: nodimandry Ramamonjisoa Benjamin
Par Taratra sur 02/07/2020 NS Malagasy, NS-Politique
Banga ny eo anivon’ny antoko Tiako Madagasikara. Nodimandry, omaly teo amin’ny faha-80 taony ny loholona teo aloha, Ramamonjisoa Benjamin. Efa loholon’i Madagasikara avy amin’ny antoko Tim ny tenany, fony fitondrana Ravalomanana Marc, teo anelanelan’ny taona 2003 hatramin’ny 2007. Voafidy ho solombavambahoakan’Atsimondrano indray ny taona 2007 hatramin’ny 2009. Voatendry ho mpikambana teo anivon’ny Filankevitra ambonin’ny Tetezamita […]
Ratsirahonana – Nosy Malagasy : “Hanahirana ny fifampidinihana…”
”Raha ohatra isika ka mbola mieritreritra ny hifampidinika: aleo aloha miandry ny vokatry ny fifampidinihana vao mandray fepetra”, hoy ny mpanao politika, Ratsirahonana Norbert. Mety hanahirana raha mbola hieritreritra ny hifampidinika aloha. Manahirana amin’ny ataon’ny Frantsay amin’izao fotoana izao izany. Misy ny fotoana efa voalaza ny amin’ny fifampidinihana fa mandeha tsikelikely io. Tsy maintsy ho […]
Minisiteran’ny Fanajariana ny tany: « Maimaim-poana, tsy andoavam-bola ny famindrana lova… »
Ho maimaim-poana. Namoaka fanambarana ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP), omaly momba ny fikarakarana taratasy famindram-pananana avy amin’ny fandovana noho ny fahafatesana. « Tsy handoavam-bola hatramin’ny 31 desambra 2020, ary tsy hisy ny fampiharana sazy amin’ny fikarakarana fanoratana na famindrana fananan-tany hatramin’io daty io », hoy ny eo anivon’ny MATP. […]
Benaivo Andrianaly Narcisse : “Tsy andraikitry ny Ceni irery ny fifidianana”
“Rehefa tonga ny fifidianana, samy afa-miteny sy manome tsiny avokoa. Ny zava-misy, ilaina ny fanentanana ny tsirairay. Tsy andraikitry ny fanjakana samy irery ny fifidianana, tsy andraikitry ny Ceni samy irery fa andraikitry ny olom-pirenena tsirairay.” Io ny nambaran’ny filoha lefitry ny Ceni, i Benaivo Andrianaly Narcisse, ny amin’izay ho laharam-pahamehana aminy, taorian’ny nifidianan’ny Antenimierampirenena […]
Fihombon’ny valanaretina: mpiasan’ny CUA iray matin’ny covid-19
Anisan’ny iray amin’ireo roa lavon’ny coronavirus, omaly ny mpiasa iray eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra. « Amin’ny alahelo lehibe no ampahafantarana antsika fa mpiara-miasa iray eto amin’ny CUA no lavon’ny coronavirus. Miaraka ory ary mirary fiononana feno ho an’ny fianakaviany ny ekipa rehetra eto amin’ny kaominina sy ny tenako », hoy ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, tao […]
Misaona ny tontolo politika: nodimandry Rakotovahiny Emmanuel
Nodimandry, omaly teo amin’ny faha-82 taony ny Dr Rakotovahiny Emmanuel. Anisan’ireo olona akaiky ny Pr Zafy Albert ny tenany. Efa nitana andraikitra ambony teo anivon’ny antoko UNDD, filoha nasionaly izy, niaraka tamin’ny « Rain’ny demokrasia ». Efa praiminisitra ny 30 oktobra 1995 hatramin’ny 28 mey 1996 ny tenany. Anisan’ny filoha mpiara-mitantana ny Tetezamita, tamin’ny 6 aogositra 2009 avy amin’ny ankolafy Zafy Abert, […]
Filoha Rajoelina Andry – Covid-19 : « Tompon’andraikitra ny rehetra… Aoka izay ny gaboraraka »
Efa nilaharana nanomboka tamin’ny 4 ora maraina ny teny Andohatapenaka ary marobe ireo tonga nanao fitiliana na koa nanontany sy naka hevitra momba ny toe-pahasalamany. Anisan’ny tiliana eny an-toerana ireo efa mitondra ny tsimok’aretina afahana maka ny singa aminy, hotilina ny covid-19. « Tafiditra ao anatin’ny fitomboan’ny olona voan’ny coronavirus isika ka tonga ny fotoana hametrahana […]
Mila resy lahatra ny tsirairay…
Par Taratra sur 02/07/2020 Edito Taratra, NS Malagasy
Tato ho ato izay, tsy mitsaha-mitombo ny tranga vaovao amin’ny fitondrana ny tsimokaretina coronavirus. Eto Antananarivo Renivohitra sy ny manodidina no tena mampirongatra izany. Nahoana? Misy milaza fa mitombo ny olona anaovana fitiliana. Tsy mahagaga raha mitombo ny tranga vaovao amin’ny fitondrana tsimokaretina. Na ahoana na ahoana, miharihary ny fiparitahan’ny tsimokaretina. Mampandini-tena sy mampieritreritra lalina. […]
Par Taratra sur 02/07/2020 Faits Divers, La Une - Taratra, NS Malagasy
Tafakatra 22 izany ireo namoy ny ainy noho ny valanaretina covid-19. Niampy roa izany, omaly, araka ny tatitry ny CCO. Efa zary lasa foiben’ny valanaretina covid-19 mihitsy izany izao Analamanga raha ny tranga vaovao tato ho ato. Zara raha mielanelana roa andro ny fahafatesana. Raha tsiahivina, mahatratra enina ireo nodimandry tao anatin’ny herinandro latsaka […]
Par Taratra sur 02/07/2020 En Bref, NS Malagasy
Nidoboka am-ponja, afakomaly, ireo roa lahy voarohirohy tamina raharaha fanaovana trafikana rongony miisa 25 gony (375kg) tratra tao Fianarantsoa. Ireo rongony marobe ireo kosa, efa nodorana tao Andreamboasary Fianarantsoa, omaly tamin’ny 9 ora maraina natrehin’ireo manampahefana ao amin’ny faritra Matsiatra Ambony. Tsiahivina fa ny 20 jona hariva tamin’ny 5 ora sy sasany no nahatraran’ny polisy […]
Fotoam-pitsarana: hanomboka ny alatsinainy izao
Hisokatra manomboka ny alatsinainy izao ny fotoam-pitsarana ny raharaha rehetra eny anivon’ny lapan’ny Fitsarana Anosy. « Telo andro mialohan’ny fotoam-pitsarana iray no atao peta-drindrina eo amin’ny tokotanin’ny lapan’ny Fitsarana ny laharana sy ny anaran’ireo olona manana raharaham-pitsarana », hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Hita ao avokoa ireo raharaha rehetra mandeha amin’ny fotoam-pitsarana iray. Izay ahitana ny laharan’ny […]
Nandritra ny volana jona: basy miisa 116 indray azon’ny OMC Matsiatra Ambony
Nahitam-bokany ny fiaraha-miasa eo anivon’ny OMC (Organe mixte de conception) sy ny Faritra Matsiatra Ambony ary ireo vahoaka eny ifotony satria basy mahery vaika anjatony tsy ara-dalana no voangona nandritra ny ezaka fampandriana fahalemana tany amin’iny faritra iny. Vokany, basy mahery vaika 10 miampy basim-borona miisa 106 ary bala maro isan-karazany no tratra, nandritra ny […]
« Précédent 1 … 7 8 9 10 11 … 1 399 Suivant »